မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သားတွေ ချီတက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ တူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ မိုးထိ မိုးမိတောင်က ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရွှေတူးလုပ်သားတွေဟာ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိဖို့အတွက် နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ သမ္မတ အိမ်တော်အထိ ရန်ကုန်မြို့ကနေ ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုဟာ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့အထိ ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
နေပြည်တော်ထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ မိုးထိမိုးမိရွှေလုပ်သားများကို ရန်ကုန် မန္တလေးလမ်းမပေါ်တွင် တွေ့မြင်ရစဉ်
ရွှေတွင်းအလုပ်သမား (၈၁)ဦးဟာ ဒီကနေ့မှာ တောင်ငူမြို့ကနေ ထွက်လာပြီး နောက်(၄)ရက်အကြာမှာ နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ဦးက RFAကို ပြောပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ဖို့ ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ကနေ မိုင်၂၇၀လောက် အကွာအဝေးရှိတဲ့ နေပြည်တော်ကို ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြကြတာပါ။
နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနရုံး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးတွေမှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုဖို့အပြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အိမ်တော်မှာလည်း အသနားခံ တောင်းဆိုဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွှေတူးလုပ်သားတွေဟာ ဇွန်လ ၁ ရက်ကစပြီး ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နေရပ်- မွုူခင္း) (ရမည္းသင္း
Nov 20, 2012 07:01 AM
This news is so wrong. I think you have to ask many workers. Because of the refusal to give permission to protest in Yamethin, the workers have protested in Yangon on November 3,6and 8 but nobody had solved their problems.
Please inform the real sources. Thanks